बेनिशाको मन कता उड्यो ? (भिडियो) « Mazzako Online
बेनिशाको मन कता उड्यो ? (भिडियो)
मिलन चाम्स निर्देशित फिल्म ‘ब्लाइन्ड रक्स’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । बायोपिक फिल्म ‘ब्लाइन्ड रक्स’ मा समम्वेश ‘उड्यो मन’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । नरेश भट्टराईको शब्द रहेको गीतमा हरि लम्सालको संगीत छ, भने बानीका प्रधानले आवाज दिएकी छिन् ।
गीतमा निर्देशक चाम्सको कोरियोग्राफी रहेको छ । दुर्घटनामा दृष्टि गुमाएकी सृष्टि केसीको जीवनको बायोपिक फिल्ममा अर्पण थापा, गौरी मल्ल, बेनिशा हमाल, अनिल शाह, बसन्त भट्ट लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्ममाहमालले सृष्टिको भूमिकामा अभिनय गरेकी छन् ।
फागुन १८ गतेबाट अल नेपाल सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँने फिल्ममा निकेश लिम्बुको लगानी रहेको छ । एन फिल्मस क्रिएसन र चाम्स इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म नेपाल रिलिजको एकदिन अघि हङकङ प्रदर्शन हुनेछ ।